ဝါးခယ်မ : ဂိတသင်တန်းဆင်းပွဲ - စာပြန်ပွဲ နှင်. တိုက်ရော.ပြုတ်သွားသော ကားတစ်စီး
ဂိတသင်တန်းဆင်းပွဲ - စာပြန်ပွဲ နှင်. တိုက်ရော.ပြုတ်သွားသော ကားတစ်စီး
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ပန်းတနော်မြို.နယ် ပုသိမ်-၇န်ကုန် ကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် (၅၂/၂-၃ )ကြား ရွှေမြင်တင်ကွေ. အနီးတွင် မေ၆ရက် နံနက်၉နာရီခွဲက ၀ါးခယ်မမြို.မှ ရန်ကုန်မြို.သို. ခရီးသည် ၃၅ ဦးတင်ဆောင်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သာကေတမြို.နယ် အရှေ. (၁၄)ရပ်ကွက်နေ သန်းဇော်ဦး (၃၇နှစ်) မောင်နှင်လာသည်. ၇က/---- အောင်ချမ်းသာ ခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ်သည် တိုက်ရော.ပြုတ်၍ အရှိန်မထိန်းနိုင်ပဲ လမ်းယာဘက်သို. ထိုးကျတိမ်းမှောက်ခဲ့သည် ။ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင်. ယာဉ်ပေးတွင် လိုက်ပါလာသူများအနက် ၀ါးခယ်မမြို. အောက်ဝဲရွာနေ အောင်မျိုးထွန်း (၂၁နှစ်) ပါ ရှစ်ဦးတွင် ဒါဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သဖြင်. ပန်းတနော်ဆေးရုံသို.တင်ပို.ခဲ့ပြီး ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်းနှင်သူ သန်းဇော်ဦးအား ပန်းတနော်ရဲစခန်းက အမှုဖွင်. အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဝါးခယ်မမြို့နယ်ဂီတအစညိးအရုံးမှ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဂီတသင်္ကေတ သင်တန်းဆင်းပွဲအခန်းအနားကို 5/5/3013ရက်နေ့ညနေ(၄)နာရီ ဝါးခယ်မမြိုနယ်အသင်းရုံးတွင်သင် တန်းဆင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ.ပါသည်
Post &Photo from ရွှေခယ်မြို.တော်
၂၀၁၃ မေလ ၁၀ ရက်နေ.က ၀ါးခယ်မမြို.တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော စာပြန်ပွဲတွင် အချိုရည် ဆက်ကပ်လှုဒါန်း ကုသိုလ်ယူကြပုံများ (ဓါတ်ပုံ-သာကီမျိုး @ WKA Group)
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 11:36 AM
Labels: မြို.လေးရဲ. သတင်းများ